Hadii doorashada Somalia 2016-ka ay Mareykan iyo Ingiriis iyo dalalka iyaga Somalia dalaalka uga ah Turkiga, Khaliijka, Kiinya, Ugaandha, Itoobiya, UN-ka iyo EU-da ay doolar ugu gadaan Madaxweynaha Somalia -MAGAFE aan u damqanayn qaxootiga Dadaab iyo Yemen, 4-ta sano soo socda dalku sidan hoos ku qoran ayuu noqon doonaa
Maanta Soomaaliya waxay ku jirtaa marxaladii 1950, waxaana moodaa in waagaas ay iminka ka roonayd maxaa yeelay xiligaas Mareykan iyo Ingiriis waxay Talyaaniga ku amreen iyagoo QM u soo maray inuu muddo 10 sano Somalia xuriyad ku gaarsiiyo, oo maalintaan xor noqonayno wayno ogayn, maantase meesha dalku u socdaa cid hubta ma jirto.
Hadii sida uu ka digay Danjire Maxamed Cusman Cumar KA FIKIR: SOOMAALIYA OO LA HOOS GELIYA WASAAYADDA IGAD 2016? aysan dhicin oo Itoobiya iyo Kenya ay Somalia gobol gobol gumeysi ugu qabsan, 4-ata sanoo soo socda 2016-2020, Soomaaliya waxay galindoonta xaalad ka xun ama la mida tii uu dalku ku jiray 26-sano ina soo dhaafay:
Qoraalka aan iminka wax yar ka badalnay waxaan qaranka.com qoray sanadkii 2014 , kolkii aan 2013 warqad furan oo aan u qoray QM Golaheeda Amaanka (UN Security Council) kuna qabsaday in mudo 25-sano ku dhow aysan Somaaliya hal kalimo oo doorasho dimoqoraadiya soo qaadin, meesha ay dhowr cisho gudaheed markeey dowlado kumeel gaara u sameeyeen Ciraaq, Maali iyo Afgaanistaan ay QM u qabatay dalalkan doorasho hal qof hal cod iyadoo waliba dagaaladu iyo qaraxyada bombku ay dhacayaam.
Bal ila fiiriya xitaa doorashadi hal qof hal cod oo Ciraaq ka dhacaysa ayaa Wakiilki Gaarka ee QM Ciraaq u fadhiyay ayaa isagoo tiranaya doorashadi isaga iyo 21 shaqaalihii QM qarax bomb uu dambas kaga dhigay, lagamana maqal QM, sida 26-sano ay u leedahay Soomaaliya amni daro awgeed doorasho hal qof hal kama dhici karto, in Ciraaq amni daro awgeed aan doorasho hal qof hal cod Ciraq ka dhici karin.
Arintan dusha ku qoran waxay ku tusinaysaa in wararka QM ay amni daro awgeed aan Somalia doorasho hal qof hal cod ka dhici karin uu yahay ruwaayad ummadda Soomaalida waqtiga loo dhuminayo .
Halkan ka akhriso warqadaas
Intaanan u guda galin sida Soomaaliya noqon doonto doorashada 2016 kadib 2016-2020, hadii ay Mareykan iyo Ingiriis iyo dalalka Somalia uga ah dalaalka ay u gadaan madaxweynaha Somalia MAGAFE, bal aan yara ifino arin loo baahanyahay in Soomaalidu fahmaan:
Waxaa laga yaabaa in dad badan uu isweydiinayso Turki sow walaalkeeni inoo soo hiiliyay maahan, sidee dalaal Reer Galbeed ku noqotay?
Turkigu waxa ay arimaha Soomaaliya soo dhex gashay xiligii abaaro beeneedka ka dhashay barakicinta ka dhashay sida QM sheegtay iyo burburintii ciidamada AMISOM iyo duulaankii ciidamadii Kiiynaatiga gobolada Jubboyinka sanadkii 2011.
Maadaama xiligii Maxaakiimta 2006 la ogaaday in Ha'adihii Bani'aadinimada ee Somalia ka hawl galayay shaqaalahooda ay ku dhex qarsoonaayeen Sirdoono u kuur galayay tayada ciidamada Maxaakiibta iyo nuucyada iyo goobaha hubka culus u yaalo, kuwaaso si toos sirta ugu gudbinayay ciidamada Itoobiya ee loo tababaray inay Somalia 2016 duulaan ku soo qaadaan, ayaa Al Shabaab oo ka fa'iidansansaysa qiyaamadan amar soo saartay ka mamnuucay Ha'adihii Samafalka inay yimaadaan goobaha ay ka taliyaan sidaasna dadkaas abaaruhu haleeleen aan wax mucaawino dunida soo gaarin.
Si aan Caalamku Mareykan u cambareyn kumaanaanka Soomaalida abaaraha iyo dagaalada uu ka wado Somalia dartood gaajo ugu la'nayay, ayuu wuxuu la xiriiray wadaad Mareykan-Turkiya oo gobolka Pensenlavia degan oo Ha'iado Samafal Islaamiya caalamka ku leh oo magaciisa la yiraa Gulen. Gulen xiligaas xiriir wanaagsan buu la lahaa dowlada Turkiga.
Mareykanku wuxuu fahansana in Islaamiyiinta Al Shabaab ay fasaxidoon Ha'aida Samalka Islaamiga Gulen ee magaca Turkiga adduunka uga shaga gasha. Waana daaqadaan tan u sahashay in si dhaqsiya uu Turkigu Soomaaliya caan ka noqdo.
Kolkii 2011 RW Turkiga xiligaas Erdogan Somalia boqosho ku yimid wuxuu yiri, inana dadka Soomaalida muslimka ah ee xiriir taariikhiya naga dhexeeyo meel kastoo ay Somalia cawinaad uga baahanyihiin kala soocimayno waan gaarsinaynaa-sidaas ayaana meelihi Ha'adaha Reer Galbeed Al Shabaab ka mamnuucday inay soo galaan, cawinaadi Turkiga lagu soo gaarsiiyay, xiriirka Somalia iyo Turkigana maalintaas bilaabay inuu xoogeeysto.
Boutroos-Boutroos Qaali Xogeyihii hore ee QM oo Masri ahaa baa waxaa laga hayaa inuu yiri: xiriirka labo dal ka dhaxeeya waa sida xiriirka labo qof ka dhaxeeya oo kale. Hadii maanta Soomaaliya kaalmada Turkey u baahatay, Turkey oo ka walwalsan in Kacdoonka Carabta (Arab Spring Uprising) uu soo gaaro Mekka iyo Madiina, Saldhigooda Ciidamada ee Soomaaliya jooga, hadii arintan dusha ku qoran dhacdo, waxa uu suurta galaysa inay daqiiqado gudaheeda ku gaaraan Mekka iyo Madina si ay u badbaadiyaan.
Waxaan xasuustaa sanadkii 2005 ayaa labo warqadood u geeyay safaarada Turkey QM u fadhiya oo loo yaqaan Turkey UN Mission. Saacadu waxay ahayd abaarihii 9:30 subaxnimo. Markaan gambaleelka albaabka gaaracay islamarkiiba haweeneeydi safiirka Sekretaariyada u ahayd baa albaabka iga furtay oo soo gal itiri.
Labada warqadood mid xiriirka taariikhiga ee Turkiya iyo Somalia ayaan uga hadlay, mida kalana waxaan u qoray Golaha Amniga iyo 15 dowladood oo ay ka kooban yihiin iyo dowladaha kale oo siyaasada Soomaaliya daneeya. Labaduba warqadood koobi waxaan ku adrees gareyay Madaxweynihii Turkiga xiligaas Abdul Gulen, tan kalana waxaan ku hagaajiyay RW Turkiga oo xiligaas ahaa Madaxweynaha iminka Erdogan.
Islaantii waxay iweeydiisay inaan aqaan masawirka darbiga dusheeda ka laa laada? Haa baan iri, waa Kamaal Ata Turki. Dabadeed waxaan iri waxaan dowlada Turkiga ka codsanayaa maadaama xiriir qoto dheer naga dhexayjiray inaad maanta oo aanan dowlad haysan aad garab na siidaan oo aan Golaha Amniga u sharciyaynin in ciidamada Itoobiya oo caadawad taariikhiya naga dhexayso ay Somalia soo galaan.
Dabadeed waxay itir maanta shaqadaydi dib baan uga dhacay oo kaffeegibaa meeska iiga daatay. markaas baa anigii rajo fiican igashay maadaama, sekretariyadi safiirka arimaheedi hoose ayba iiga sheekeynayso. Dabadeed waxay itiri iminka waa subax hore safiirk marunakuu goor dhow buu yimaandoonaaa, warqadahaadana waan siinaya, Dowlada Turkiyana waan u gudbinaynaa.
Warqadahaas mid kamid ahayd halkan ka akhriso
Ciidamada AMISOM OO 22.000 kun dhaafay ee Soomaaliya jooga amninga dowlada iyo Soomaalida kaliya ma hayaan ee waxaa Mareykan iyo Ingiriis isticmaalaya magaca Golaha Amniga QM u fasaxay inay ilaaliyaan amniga cid kasta oo Soomaaliya ka hawl gasha waana sidaas sida Turkiga Somalia jooga amaankooda uu hayo Golaha Amninga oo AMISOM isticmaalaya.
Soomaaliya waxay u baahantahay madaxweyne wadaniya oo yiraahda ciidamada Soomaaliya ayaa i ilaalinaya, waana ka maarmanaa ciidamada shisheeye, laakiin; kolkssns waxaa dhici karta in sidii markii geesigii Congo Dem. Kabiila uu ku yiri ciidamada Ugaandha iyo Sirdoonkii CIA garabsiinayay, waan idinka maarmanaa ciidamadeena Congo Dem. baa i ilaalinaya, kheyraadka Congo Dem. dadka Congo baa leh, kolkaas waatii ay Ugaandheesku oo la yiri CIA-da wax ka ogeed dileen iyagoo leh intaasoo sanaan ku ilaalinaynay markaasaa maanta leedahay iska baxa!
Iska ilow dacaayada UN-ka Michal Keating baa saas yiri iwm. Somalia meelaha adduunka ugu muhiimsan bay ku taalaa, markay dhulka dhacdana Mareykan iyo Ingiriis baa sidii dafo hilib laacaysa laaceen, Keating waa shaqaalahooda, amaraduu fulinayo QM kama qaato ee iyaguu ka soo qaataa.
Keating waa shaqaale fulinaya hawlihii Mareykan oo isticmaalaya magaca OM uu soo faray inuu sameeyo.
British foreign secretary William Hague inspecting
AMISOM troops in Mogadishu, Somalia Feb. 2012
Si kastaba ha ahaatee, Soomaaliya maanta Mareykan iyo Ingiriis ayaa qandaraas hawlaahooda Somalia inay u fulinayaan kusiiyay Turkiga, Khaliijka, Kiinya, Ugaandha, Buruundi, Itoobiya, UN-ka iyo EU-da.
Soomaliya waxaa la galiyay Gumeysi Qarsoon:
Khaliijka uu horkacayo (UAE) waxaa la siiyay Wazaarada Maal Gashiga.
Kiinya, Ugaandha, Buruundi iyo Itoobiya waxaa la siiyay Wazaarada Difaaca iyo Amniga Gudaha Somalia, oo IGAD-AMISOM loo yaqaan.
Turkey waxaa loo dhiibay Dib u dhiska, Wazaarada Caafimaadka, arrimaha Somalia-Somaliland, hawlaha Gargaarka Bani'aadinimada, Qalabaynta Ciidamada iyo Waaxda socdaalka Dekada iyo Airipoorka Caalamiga ee Soomaaliya.
EU-da waxaa loo dhiibay Wazaarada Maaliyada iyo ilaalinta Xeebaha iyo Badda Somalia.
QM waxaa loo dhiibay Wazaarada Arrimaha Gudaha, Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo Wazaarada Cadaalada.
Mareykan wuxuu qaatay booska Madaxweynaha, Ingiriiskuna wuxuu qaatay jagada Ra'iizul Wazaaraha iyo Waziirka Iskaashiga Caalamka.
Waxaa xusid mudan in Geoge Bush oo isagoo si dadban u isticmaalaya magaca QM Golaha Amniga u keenay ciidamada AMSIOM Soomaaliya dagaalka Argagixiso la dirirka Al Shabaab.
Hadii Soomaaliya nabad ka dhacdo Mareykan, Ingiriis, AMISOM, EU iyo IGAD ma jogayaan dalka.
Sidaas awgeed waxaa AMISOM Somalia loo keenay maahan inay Shabaab la diriraan ee waa bil caksi:
hadii Al Shabaab meesha ka baxdo, Mareykan iyo Ingiriis iyo AMISOM, EU iyo IGAD iyagauna way ka baxayaan Somalia.
Sidaa awgeed waxa AMISOM Somalia loo keenay inay ilaaliyaan oo difaacaan jiritaanka Al Shabaab si ay sababta dalalkanu Soomaaliya u joogaan aysan meesha uga bixin.
AMISOM waxay Somalia u joogtaa inaan Soomaalida ciidan dhisan iyo inaan Soomaalida iyo Al Shabaab heshiinin, si Mareykan, Ingiriis iyo dalaaladooda Somalia: Turkiga, Khaliijka, Kiinya, Ugaandha, Buruundi, Itoobiya, UN-ka iyo EU-da aysan Soomaaliya uga bixin.
Hadii Mareykan iyo Ingiriis iyo AMISOM, EU iyo IGAD aysan Somalia joogi lahaayeen Soomaalida iyo Al Shabaab oo dad walaalo ah waa hore ayay heshiin lahaayeen.
Laakiin nasiib daro Soomaaligii geesiya ee isku daya inay heshiiyaan Soomaalida iyo Al Shabaab ciidamada AMISOM ayaa qaarajinaya oo gaariga uu la socdo bam ugu xiraya dabadeedna Al Shabaab ayaa dishay oranaya, ilaa jiritaankooda ayaa caburinaysaaye.
Marka kuligood intaanan Turki ka ahayn dalalkan dantoodu waxay ku xirantahay inay wadjir u difaacaan Al Shabaab oo ciidan tayo leh Somalia u dhisan, si aysan iyago meesha uga bixin, daruuf siyaasadeed baana mar mar ku qasbayso inay iska yeel yeelaan inay Al Shabaab ku duulaan.
Iska ilow African Union (AU) iyo IGAD baa Soomaaliya ciidamo nabadeeya AMISOM ka joogaan. Africa Nigeria ayaa ugu xoog badan, ayadana waatan hada lagu doodayo ciidamo nabadeeya oo ka socda dalalka CHAD, CAMEROUN iyo NIGER lageeyo si ay u nabadeeyaan oo Buka Haraam uga difaacaan. Iminka ciidamada CHAD Nigeria iskood ayay ugaleen ugana dhex dagaalamayaan.
Ma Buruundeeski caalamku markuu magacooda maqlo uusan Genosiid maahne wax kale uusan ku xasuusan oo xita iminka QM u fasaxday in ciidamo Afrikaana lageeyo si Genosiid aysan u bilaabin baa Soomaaliya nabad u haya?
Ma Sierleon-ti aan caalamku waxaan ka ahayn caruurtooda saqiirada inay gacmaha iyo lugaha ka jar jaraan maahane oo ilaa hada ciidamadii Caalamka oo nabadeeynayay ay wali qaarkood joogaan dalkooda oo kolkii cudurka IBOLA haleelay uu xitaa waziirka caafimaadka ee dowlada Colombia dalab uu u diray Barlamaankooda looga aqbalay oo Colombia sharci ka digtay in cidii cagta soo saartay xuduudka Sieraleone aan loo ogalaadoonin inay cagta soo saarto xuduudka Colombia wuxuu rabo ha ahaadee baa nabadaynta Soomaaliya wax ka tari kara?.
Ma Amxaaradi dagaalka Somalia-Itoobiya 1977-78 adduunka salkiisa dalka Cuba oo Mareykan boqol iyo xogaa kilomitir u jira ka soo kaxaysatay 11.000 Ciidamo ku hubeeysan qalabkii ugu dambeeyay ee Ruushku sameeyay uuna horkacayay generaalkii Ruushka Vasilevsky ee Jarmalka Dagaalkii Labaad ee Caalamka jabiyay -naceyb ay u qabaan Soomaalida awgeed baa maanta Somalia nabad ku soo dabaalinaya?
Ma Sawaaxiligii dagaalkii NFD ee Somlia-Kenya 1963-1967 Caalamka ka dhaadhisay in Soomaalida ay dhulkoodi ku soo duushay yihiin Shufto, dabadeedna intay xoolahoodi ka dhacday xerooyina ku ooday, dabadeed sidaas gaajo ugu la'day baa maanta Somalia nabadaynayaa ku faanaya?
Ma Muusaveni Ugaandheeska 1988-89 dagaalkii uu isaga iyo Ruwanda ku qaadeen Congo Dem. oo ay Ha'yada baniaadanka Human Rights Watch tiri, waxaa dagaalkaas ku dhimatay 6.5 milyan qof oo Congoliis ah, oo bal iska daa dadka baniaadanka u jirnaxee, uu xitaa Donald Trump yiri, hadaan doorashada ku guuleeysto dilaaga diktatoorka Museveni xabis ayaan dhigaya baa maanta Somalia nabad ka sugaysaa?
Soomaaliya waxay noqotay Raq libaax neef ku cunuyo , oo dugaaga hilib cunka oo dhan isku soo harereyeen, iyagoo isleh marka ay libaaxdu ka dhargto ilaa waa dhul barwaaqaahe, ayaa hambadiisa ka dhergidoontiin.
Doorashada 2016 ee dadban waa Waqti Kordhis dadban
Soomaalida waa la khiyaameeyay oo wax la yiri doorasho dadban baa ka dhacayso Somalia. Waxa doorasho la leeyahay waa wixii 26-sano Mareykan Ingiriis iyo oo Fransiiska -oo qibradiisa qotada dheeroo Africa u leeyahay iyo ciidankiisa Jabuuti u fadhiya Jabuuti kaashanaya oo Soomaaliya laga soo bilaabo dowladii 1991 Cali Mahdi labo sano kmg ilaa hada hadba dowlad kmg oo waxaan waqti kordhin hadba magac dadban wadata loo sameeynayo.
Qaabka doorashada Waqti Kordhis dadban lagu fulinayo waa ciidamada AMISOM baa amni daro iyo dagaalo sokeeye dalka ka abuuraya si ruux wadaniya uusan doorashada uga soo qayb galin amni daro awgeed oo meesha doorashada MAGAFE kaliya uu gaaf wareegaysto.
Bal arka waxaa la yiri madaxweynaha Somalia ha la doorto 15 ilaa 20-ka December. Ciidamadii Itoobiya 2006 waxaa la yiri Somalia ku duula 20-ka December. Waayo xiliyadaas waa kolka caalamku uu mashquul ku yahay waxa la yiraa ciida Thanksgiving, Merry Christmas iyo Sanadka Cusub u fasaxyo iyo dabaaldagyo lagu jiro. Xiligaasaa la rabaa in bacda laga furo MAGAFAHA Madaxweynaha cusub ee Somalia.
Kolkii ay doorashada 5 MAGAFE isku soo haraan oo kii raba ha guuleeystee dowladahan waa iskugu mid oo hawshii kii hore ama wixii dowladihii ku meel gaarka 26-sano mugdigi Somalia ku hayay unbuu raadkoodi dib loogu laabanaya, ilaa khibrad, karti, tayo iyo awood uu MAGAFUHU dal kodhawaad 30 sano burbursanaa uu ku kala maareeyo malehe.
Haddii MAGAFAHA Libiya uu ajnabiga UUN kaliyah cigaabi jiray MAGAFAYAASHA Soomaalida waa bil cagsi: Soomaalida kaliya ciqaab la beegsadaan, ajaanibkana sidii inay Soomaaliya leeyihiin bay ula dhaqmaan.
Xitaa hawada la neefsado ma gafayaan. Magaalada Muqdishu oo xeebta ka neefsata hawada qabowna ay badda ka soo gasho safaaradaha Turkiga iyo Eu-da baa ku wareejiyeen.
Dadka iskaba dhaafe dugaaga duurka ku nool ma gafayaan. Xabada ay AMISOM `barin walba ka ridayaan ayaa xitaa xayawaanki duurka sida maroodigi Kiiyna u carareen.
Badda Soomaaliya iyo Jubbooyinkan magafayn oo Kenya mar hore carbuun la baxday.
Gabdhaha iyo hooyooyinka Soomaalida ma gafayn oo kuwa aysan ciidamada AMISOM ka fakada Sacuudiga ka iibsanayaan.
Geedihii xooluhu daaqijiray, daruuraha roobkana soo jiidajiray dhuxul ay SHIISHADAHA Sacuudiga lagu cabo bay u gubeen ila Soomaaliya ka noqoto Saxaarada Sacuudi Carebiya oo kale.
Arintaan oo laga yaabo hadaanan muwaadiniin ka hortagin inay Somalia oo dalka adduunka ugu xoolo badan Saxaarad aan neefna ku noolayn.
Yaasiinka! Yaasiinka!, xitaa dhulkii ay saxaarad ka dhigeen ma gafayaan: ciidii Saxaarada Dubai baa maraakiib loogu raraa. Dekadaha, Airpoorka, iyo Xerooyinka ciidamada qalabka sida iyaga warkooda dowlado ajnabi bay ku wareejiyeen, ilaa goobahaas waa maskaxdi dalkee.
Dhibaatada Soomaalida waa waxa af-Qalaad lagu yiraahdo (the Tradey of Commons): ummad kuli wada halaagmaysa.
Xitaa kan Madaxweynaha inoo ah isagaa ka wal wal iyo cabsi badan kan suuqa iska maraya. Madaxweynuhu qofkii ka soo horbaxaba wuxuu moodayaa inuu yahay Al Shabaab loo soo diray inuu Bam ku qarxiyo. Cabsi uu ka qabo in la dilo buu leeyahay ciidamada Afrikaanka AMISOM war wada xira jidadka Xamar oo dhan, 400 boqoloo ciidamo Ugaandhes iyo Nigeriyan ha la keeno Somalia.
Hadaan ruux walboo Soomaaliya isku diyaarin ka hortigada u iibinta Mareykan iyo Ingiriiska iyo dalalka Somalia dalaal uga ah: Turkiga, Khaliijka, Kiinya, Itoobiya, UN-ka iyo EU-da Madaxweynaha Somalia MAGAFe aan qaxootiga Dadaab iyo Yemen ku silicsan u jiirnaxayn, 4-ta sanoo soo socota hadaanan Soomaaliya gumeysi Amxaaro iyo Kiinya gobol gobol u kala googoosan, marxalada Soomaaliya sidan hoos ku qoran oo eg sidii 16-sano ina dhaafay ay Soomaalidu ku nooleed ama si ka sii liidata umbay ahaandoontaa:
Xitaa Qaraxyada ma Gafayaan. Dhow qarax markay dhacdaba 2.000 ciidamo Ugaandhees iyo 3.000 ciidamo Itoobiyaana baa dalka soo gala.
Waxa 2016-2020 Somalia ku dhicidoona hadii 2016 Madaxweyne MAGAFE la Doorato:
Durbadiiba duligii Mareykan iyo Ingiriiska iyo dalalka Somalia iyaga dalaalka uga ah: Turkiga, Khaliijka, Kiinya, Ugaandha, Itoobiya, UN-ka iyo EU-da ay Soomaalida kula dhaqmayeen 26-sanoo ina soo dhaafay oo 2-sano ama 4-sano jahawareer dib u bilowday:
hoos waxa ku qoran waa tusaale yar oo ka mid ah dhibka iyo silica sugaya Soomaalida haddii Doorashada 2016 la doorto Madaxweyne MAGAFE ah.
Tusaaladan waxaan ka soo qaadanay sida Madaaxweynayadii 26-kii sano ina dhaaftay sida markii la doortay ay Soomaalidu ugu farxeen iyo sida kolkii waqtigoodi dhamaaday ay ummadda Soomaalida iyo dalka Soomaaliya god gumeysi ugu rideen.
Sida 27-kii sano ina dhaaftay Soomaaliya lagu arkay, kolkii dowlad aan shaqaynin la doorto in Idaacadaha sida Universal, VOA iyo BBC ay hadana 'Deja Vu' wararkii ay Soomaalida 27-ki sano ku soo celcelinayeen oo waxba iska badalin Soomaalida 2016-2020 ku soo celcelindoonaan, midhaa waxay maqleen in Soomaalidu yihiin -DAD WAR KU NOOL:
Xalay Somalia waxay dooratay 'Madaxweyne Shiikh hebel ama fulaan hebel'. Madaxaweynaha cusub ee Soomaaliya Jaamicad Hindiya ku taal buu wax ku soo bartay. Waana ruux karti badan oo Soomaaliya u horseedi doona nabad waarta, horumar iyo barwaaqo. Tv-yada Universal, VOA, BBC-da baa DABAALDAGA iyo farxada Soomaalida laga daawaday. Jidadka magaalada Mogadishu Soomaali aad u faraxsan oo calanka iyo sawirka Madaxweynaha ruxayay ayaa iskugu soo baxay.
Waxaa uu Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya u dhambaal hambalyo ka helay Madaxweynaha Kenya, RW dalka Itoobiya, Madaxweynaha Ugaandha, Madaxweynaha Turkiga, Boqorka Qatar iyo Madaxweynaha Isutaga Imaaraadka iyo Madaxweynaha dalka Burundi, waxa ayna Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ka balan qaadeen inay sii wadidoonaan kaalmada ay ka siiyaan Soomaaliya la dagaalaka iyo ciribtirka Soomaalida Al Shabaab ee xiriirka la leh Al Qaacida, waxa ayna u rajaynayaan Madaxweynaha inuu Soomaaliya barwaaqo iyo nabad waarta.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa maanta la hadlay shacabka Soomaalida u sheegay in Soomaaliya maanta waa cusub u baryay ayna ka baxday mugdigii ayna ka baxday mugdigii ay 27-ka sano ku jirtay. Madaxweynuhu wuxuu ka balan qaaday in 4-ta sano soo socota uu 6 Tiir inuu qabanayo 4-t sano ee soo socota:inuu Amniga dalka dhaqsiyoo ku soo cilidoono, Al Shabaab-na la ciribtirdoono, dhaqaalaha dalka horumaridoono, dhalinyaradana shaqo u abuuridoono, inuu dalka Shareecada Islaamka ku dhaqidoono iyo inuu ciidamada dalka dhisidoono si aan uga maarmano ciidamada Africa ka jooga Soomaaliya.
Madaxweynaha shalay loo doortay ayaa isagoo hoteelkii lagu doortay kula shirayay wafdi ka socday Itoobiya oo ay horkacayeen waziirka arrimaha dibada iyo Generaal Gabre ayaa saaka irida hore ee hoteelka gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa lagu qarxiyay. Labo ka mid ahaa waardiyihi hoteelka ayaa qaraxa ku dhimatay, madaxweynihina wuu nabad qabaa. Ilaa hada cid sheegatay qaraxaas majirto, laakiin waxaa lagu tuhunsayahay in ay Al shabaab ka dambaysay maadaama sida caadada Soomaaliya u ah qaraxyada Al Shabaab ayaa sheegata.
Xogeeyaha QM iyo dowlada Mareykanka ayaa falkaas cambaareyeen. Waxa ayna yiraadeen qaraxan Al Shabaab waxa uu cadeenayaa sida loogu baahanyahay in Caalamku ka taageero dowlada Soomaaliya ee doonaysa inay amni iyo nabad ummadda Soomaalida 27-sano dhibanayd ku soo celiso.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya hawlo badan ayuu dalkiisa u soo qabtay. Ha'aydaha samafalka ee Muqdishu oo xaafiis-na Nairopi ku leh buu aasaasay oo madaxna ka ahaa. Soomaalida aan 26-sano wax dowlad dhexe oo shaqeynaysa lahayn aad iyo aad bay doorashadiisa ugu farxeeen. Soomaali badan oo BBC-da la soo xiriirtay waxay cadeeyeen in maanta Soomaaliya madaxweynihi ay mudoo dheer sugaysay dooratay.
25 December waxaa Madaweynaha cusub ee Soomaaliya u safrayaa dalka Mareykanka si uu uga qayb galo shirka weyn ee QM New York dabayaaqada bisha lagu qabandoono, wuxuuna 3 casho ku sii hakadoonaa casuumaad uu boqorkia Qatar ka helay magaalada Doxa si ay uga wada hadlaan xiriirka iyo iskaashaga wacan ee ka dhexeeya labada dal
20 January 2017 waxaa Madaweynaha cusub ee Soomaaliya uu qado sharaf u sameeyay Xildhibaanada cusub ee Barlamaanka Soomaaliya.
Ra�iisul wazaaraha cusub ayaa dhowr iyo labaatan waziir iyo dhor waziiro ku xigeeno soo magacaabay markii dhowr bilood la sugayay.
kolkii labo ka mida waziirada cusub Barlamaanku uu diiday, Madaxweynaha iyo Ra'iizul Wazaaraha dood culus ayay ku dhex martay maadaama madaxweynuhu kawaayay liiska waziirada labo nin oo saaxiibadiis ah.
Gaari Taanki oo ahaa nuuca aan miinadu karin oo ciidamada Ugaandha wateen ayaa saaka wiil yaro Soomaaliya iyo hooyadiis ku jiiray magaalada Muqdishu xaafada wardhiigleey, meydkoodina jidka ayuu uga cararay.
10 May 2017 waxaa Madaweynaha Soomaaliya u duulidoona magaalada Brussel caasimad EU-da dalka Belgia si uu uga qayb qaato shirka EU �da ee Brussel ka dhacaya oo Soomaalida lacag yabooh 350 Milyan Euro loogu aruuridoono, General Gabrana Brussel ayuu shalay u duulay, lamana oga ilaa hada in safarkiisu shirka Somalia la xiriiro iyo inkale.
Madaxweynaha Somalia ayaa saakay Aripoorka Aden Cadde Adisababa Itoobiya uga duulay si uu dhigiisa Itoobiya uu ugala hadlo sii xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dal ee WALAALAHA ah ee saxiibtinimada gaarka ah ka dhexayso, si labada dal ee walaalaha ah uga wada hadlaan la dagaalanka cadowgooda ee Soomaalida Al Shabaab kula jiraan.
Qarax saaka ka dhacay Hotel Saxafi ayaa 3 xildhibaan iyo hal waziir lagu dilay. Al Shabaab ayaana sheegatay qaraxaas. Madaxweynuhuna eheladii ay ka geeriyoodeen masuuliyiinta wuu ka tacsiyeeyay. Mareykanka iyo QM way cambaareyeen qaraxaas.
Baaritaan dheer oo QM sameeysay waxay tiri dowlada Soomaaliya waa dowlada adduunka u musuq maasuq badan. Lacag 10 milyan oo mucaawino Somalia loo siiyay ayaa la waysanyahay meel ay ku dhacdo.
Magaalada Muqdishu ayaa maanta Shirkad Norway leedahay ayaa dowlada Soomaaliya heshiis shidaal baaris ku la gashay, shirkadaasu badda Kiinya ayay shidaal ka baarta, saldhigeeduna wuxuu yahay magaalada Nairobi.
Kolkii ciidamada Soomaalida ka cabteen in la mushaar loo siiyo 100 doolar kuwa AMISOM-na 1200 doolar qaataan ayaa generaalka hogaamiya ciidamada Ugaandha sheegay inaan muddo 6 bilooda mushaar la siinin.
Xiligii lagu jiray dukashada salaadii subaxa ayaa mar qura Muqdisho Qarax xoogan ruxay magaalada kasoo ka dhacay Hotel Hebel. Al Shabaab ayaana qaraxaas sheegatay. Labo xildhibaana wey ku geeriyootay qaraxaas, Saddexna dhaawac fudud ayaa soo gaaray. Markiiba ciidamada Burundi ayaa soo gaaray oo nabad ku soo celiyay goobti qaraxa ka dhacay, sidaas waxaa yiri waziirka arimaha gudaha. Madaweynaha Soomaaliyana wuxuu tacsi u diray reerihii xildhibaanadu ka geeriyoodeen.
Amaandarada Soomaaliya darteed dowlada Madaxweynaha Ugaanda Museveni wuxuu yiri 4,000 ciidan baan Soomaaliya u soo dirayaa.
5000 kun oo ciidamo Itoobiyaana ayaa xadka Soomaaliya dhanka Feer Feer ka soo talaabsaday oo Beletweyne soo gaaray maanta, markeey baaritaan magaalada ku sameeyeen waxay kaxeeysteen cuqaal, odayaal iyo arday Soomaaliyeed,(arrintan sow beeni mayso kolki wargeys Reer Galbeed ku daray Xasan Shiikh 100-ka Madaxweyne Adduunka ugu quwad weyn. Haddi dacayadan runtahay miyaa la dhihi lahaa Amxaaraa xuduudka Soomaalida soo gashoo kaxeystay cuqaal, odayaal iyo arday Soomaaliyeed ama Kiinya God 700 mitir ka qaday dhulka Soomaaliya si ay Soomaalida dhul uga goosato).
Dowlada Kenya ayaa sheegtay inay xirada Dadaab u rarayso meel 30 km. u jirta magaalada Kismaayo, islamarkaana ay dadajinayso dhismaha DARBIGA ay xuduudka Somalia ka dhisayso
23 January Waxa QM u dhawaaqday in muranki dacwada badeed ee ka dhexaysay Somalia iyo Kenya in 27 Jan. 2018 oo Aaaga Gaarka Ganacsiga (Economic Exclusive Zone: EEZ) ee dalka Somalia oo 200 mile ay u badashaay ay Maxkamada Dambiyada International Criminal Court (ICJ) ka dhigty 80 mile meesha awal ay ka ahayd 200 Miles, halka inta 200 mile ka hartay 120 mile dhul Badeed ka badan 38,000 sq. km. la siiyay Kenya oo dacwadii Somalia kaga guuleeysatay.
Mucaaradka dalka Kenya wuxuu dowlada ka codsaday inay sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamada Kenya Somalia ka soo saarto.
Hay'ada Qaramada Midoobay u qaabilsan Xanaanada Arimaha Bani'aadamnimada (OCHA) abaaraha Somalia ka jira awgeed 2 milyan Soomaaliya inaysan haysan waxay cunaan, waxayna deg deg Caalamka uga codsatay in cawinaad la soo gaarsiiyo.
Labo qabiil ayaa Tuulo 20 km u jirta caabudwaaq isku diriray, 15 ruux bay dagaalkaas iskaga dileen. Madaweynuhu wuxuu codsaday deg deg dagaalka lagu joojiyo. Waxa Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Hebel wuxuu yiri, "Dadka Soomaalida dagaal way ku daaleen, maanta nabad bay u baahanyihiin", laakiin dagaalku wuxuu istiaagay markii ciidamada itoobiya soo kala dhexgaleen.
Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowlada Soomaaliya ayaa maanta Baardheere kala wareegay Al Shabaab 19 Al Shabaab ayaa dagaalka uga dileen.
Hayadaha u dirira xuquuqda bani'aadanka ayaa ku dacweeyay ciidamada AMISOM inay Tacadi Galmo ku kufsadaan gabdhaha iyo hooyooyinka Soomaalida oo aan dowlad ilaalisa haysan kolkeey daawo u soo doontaan.
28 August 2017 ayaa Doon ay dhalinyaro 200 tahriibayaal Soomaaliyeed saarnaayeen ayaa badda Liibiya iyo Talyaaniga u dhexeeysa maanta ku rogmatay. Markab Talyaaniya ayaa wuxuu badbaadiyay 25 ruux oy ku jirtay gabar Soomaaliya oo labo cunug oo ay wadatay ku jireen kuwii badda ku dhintay. TV-ga Qaranka iyo idaacada BBC-da oo teloofanka khadka kula xiriiray ciidamada badda ee Talyaaniga ee Jaziirada Lambadusa ayaa xaqiijiyeen shilkan, iyadoo BBC-du tiri Poliizka Talyaaniga ayaa doonaya iney ugaadaan inuu ku jiray Ninkii doonta waday 25-ti qof ee badbaaday.
Muranka soo kala dhex galay Madaweynaha iyo RW. wuxuu horseedi karaa in dowladu burburto; Itoobiya ayaa Madaxweynaha saaka deg deg Adis Ababa ugu yeertay, si loo xaliyo khilaafka soo kala dhex galay labada mas'uul ee dowlada Somalia ugu sareeya.
13 October 2017, markuu dagi waayay muranka dowlada Soomaaliya ayaa maanta RW Soomaaliya iscasilay. Wuxuuna madaxweynuhu Soomaalida u sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu RW cusub soo magacaabi doono.
Markab Turkiya oo mucaawino u siday Somalia ayaa ayaa maanta duhurkii ku soo xirtay dekada Muqdishu.
Dowlada Mareykanka iyo EU-da ayaa sheegeen inay muhiim in la dadajiyo dhismaha ciidanka Qaranka Somalia maadaama ciidamada AMISOM aysan kaligood uwaadin inay Somalia nabadeeyaan.
Ciidamada Kiinya ay shalay ku laayay dad shacab ah tuulo ku taal Jubbooyinja oo 60 kilomitir u jirta magaalada Kismaayo. Dad goob joog ahaa ayaa sheegay ciidamad Kiinya ka bilaabeen dhismo noqonaya Xad hadda kadib u dhexeeydoona Soomaaliya iyo Kiinya.
3 February 2018 Golaha Amniga ee QM shirkooda maanta yeeshay shir arrimaha Soomaaliya ku saabsanaa kuna gaareen Qo�aan UNSC78009somalia kaasoo muddo 6 bilood u kordhiyay joogista ciidamada Midowga Afrika AMISOM Somalia.
Generaalka xukuma ciidamada Talyaaniga Generaal Bonini ayaa maanta somalia soo gaaray ciidamada Soomaalida u qaybshay KABO iyo dhar, madaxweynaha Soomaaliyana wuu uga mahadceliyay generaalka mucawaanidaas naga soo gaartay dalka Talyaaniga oo muddo dheer xiriir qoto dheer Somalia kala dhexeeyay.
20-ka June 2017 waxaa Madaxweynaha Soomaaliya safar u aadi doona Carabta Sacuudiga iyo Imaaraadka si Soomaalidu garab uga siiyaan ku soo celinta nabad waarta dalka Soomaaliya.
Shir ay ku yeesheen magaalada Adis Ababa ururka IGAD oo arimaha Soomaaliya looga hadlayay waxay go'aansadeen in la xoojiyo ciribtirka Soomaalida Al Shabaab. Caalamkana la waydiisto inuu dhaqaale u soo diro Somalia si loola diriro Al Shabaab.
Dowlada Jarmalka ayaa Spain saaka kala wareegtay ciidamada EU-da Atlantis oo ilaaliya xeebaha Somalia oo Burcadbadeedka Soomaalida la dirira oo xaruuntiisu tahay dalka Jabuti. Waxaana EU-du joogitaanka ciidamadooda Somalia u cusboonayday muddo labo sano ah.
Daawo SAWIRO aad u qurux badan Madaxweynaha Soomaaliya oo booqday magaalada Jowhar, heer sarana loogu soo dhaweeyay, furayana Airiboor cusub oo ah midka ugu casrisan qaarada Afrika oo dowlada Turkigu dhistay.
23 March 2019 maanta ayaa Xogeeyaha Guud ee QM wuxuu Soomaaliya u soo magacaabay Ergey Cusub Smith Filip, oo dalka CANADA u dhashay, wuxuuna badalaya Ergeyga Keating. Smith wuxuu QM uga soo shaqeeyay Koonfur Suudaan, Ciraaq iyo Afgaanistaan. Maadaama dalalkaas howlo dhexdhexaadin muhiima QM uga soo qabtay, waxaa la filayaa inuu howlaha murugaysan ee Soomaaliya wax weyn ka badalo. XGQM wuxuu yiri shaki iigama jiro inuu Ergay Smith gaarsiidoono 27 dagaal sokeeye kadib inuu dib u heshiisiin, nabad iyo barwaaqo ummada Soomaalida.
Sanadka soo socda 2020 ayaa dowlada Ingiriisku ku dhawaaqday inay marti galidoonto shirweyne Caalami ah oo Somalia loo qabanayo magaalada LONDON. Shirkaas waxaa ka soo qayb galidoonta dalal ka badan 93 dal. Waxaana shirka wadajir u hogaami doona RW Ingiriiska, Madaxweynaha Somalia iyo Xogeeyaha QM. shirka waxaa lagu eegayaa sidii Somalia ay horumar xaga amnidarada, la dagaalanka argagixisada Soomaalida Al Shabaab, iyo sababta keentay in doorasho hal qof hal cod aysan sanadka soo socda 2020 Somalia ka dhici karin amni daro awgeed.
Hay'adaha u dooda Xuquuqda Bani'aadanka ayaa yiri Ciidamada AMISOM iney TACADI GALMO IYO KUFSI u geeystaan Gabdhaha iyo Dumarka Soomaalida oo dagaalaadu barakiciyeen, kolki ay xeryahooda daawo iyo kaalmo u soo doontaan, maadaama muddo 30-sano wax dowlad ah oo kaalmeysa aysan haysan.
Ergeyga QM Soomaaliya u fadhiya Somalia Smith wuxuu dowlada u sheegay inaan wax 4.5 ah ay Somalia mar dambe wax ku qaysandoonin oo inkastoo waqtigu u cariiri yahay, Shirka wadatashiga Gobolada dardar galiyaan doorashada dadban ee dhacaysa sanadka socda 2020 si sanadka 2024 Soomaaliya uga dhacdo doorasho HAL QOF HAL COD.
Ergeyga QM Soomaaliya u fadhiya Somalia Mudane 'Hebel' wuxuu dowlada u sheegay inaan wax 4.5 ah ay Somalia mar dambe wax ku qaysandoonin oo inkastoo waqtigu u cariiri yahay, Shirka wadatashiga Gobolada dardar galiyaan doorashada dadban ee dhacaysa sanadka socda 2024 si sanadka 2028 Soomaaliya uga dhacdo doorasho HAL QOF HAL COD.
Ilaaheey wax lama aha in hagardaamada Mareykan iyo Ingiriis Soomaalida ku hayo inuu ka indha saabo oo ay Madaxweyne wadani iyo cadaalada ay doortaan si ay sharaftoodi 1960-ki usoo ceshadaan.
Shirkii Soomaaliya ee Itoobiya, kiinya iyo Mareykan ku yeesheen Aqalka Cad, Washington.
Madaxweyne wadaniya oo ummadda Soomaalida daacad ugu adiiga allaha u sahlo!